I-Condo enomtsalane, eNtofo kunye neQuaint eLake Geneva!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguTricia
Quaint 1 BD 1 BA Condo ngaseLake Como. Ichibi langaphandle lonyaka lisanda kulungiswa ngokutsha. Kukho ukuqaliswa kwesikhephe, ibhola yevoli kunye nenkundla yentenetya. Ngomrhumo wemihla ngemihla, ungasebenzisa ichibi, i-spa, kunye ne-gym kwi-Ridge Hotel ecaleni komnyango. Yitya kwindawo yokutyela ekufutshane yaseMars okanye ujonge ivenkile yekofu yeHotele yaseRidge, indawo yokutyela kunye nomngxuma omkhulu womlilo wangaphandle! Ndikufutshane ngayo nantoni na onokuyidinga. I-Condo ibonelela ngeetawuli, izinto zangasese, imidlalo, iWiFi, intambo esisiseko, iRoku, igrill yombane, indawo yomlilo yegesi, ikofu, iti namanzi!
Iyunithi esandula ukulungiswa kunye nengenachaphaza enegumbi elaneleyo lokuhlalisa iindwendwe ezi-4. Ukuba unabantu aba-6, sinawo umatrasi ovuthekayo- vele ubuze. Kuninzi ukwenza kufutshane kwaye kuhlala kumnandi ukudibana nabantu! Okubuhlungu kukuba, izinja azivumelekanga.
4.93 · Izimvo eziyi-173
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi173
I-Interlaken Condos ikufuphi ne-Ridge Hotel, enika izinto ezikhethekileyo ezimnandi, umculo, amachibi, njl. Kukho umrhumo wemihla ngemihla yokusebenzisa i-pool yabo kunye ne-gym kodwa ehlotyeni sinethunga lethu lokusebenzisa i-pool yangaphandle. Sisecaleni kweLake Como kwaye kuhlala kukho iirenti zebhodi yokubheqa kunye neenkundla zentenetya ukonwabela nazo. Yiza nesikhephe sakho. Yivule kwaye uyipakishe apha!
Uziikhilomitha ezi-4 ukusuka edolophini yeLake Geneva, kwaye ukufutshane naseWilliams Bay. Kukho iilwandle ezininzi kule ndawo kwaye iiMarike zamaFama zenzeka iveki yonke ngexesha lonyaka. Kukho umculo ophilayo kwiindawo ezininzi, kwaye ihlala ikhona iminyhadala unyaka wonke! Kukho ukukhwela intaba, i-zip line, i-safari yezilwanyana, indawo yokuthenga, imiboniso yomlingo, iqonga elikhulu lokuhlala, indawo yokutya emangalisayo kunye nokunye okuninzi!
Umbuki zindwendwe ngu- Tricia
Umamkeli uhlala kumgama oziikhilomitha ezi-5 kwaye apha ukunceda ngemibuzo okanye iinkxalabo!